Ngaba baninzi abantu abasondelene nawe (imizimba engaphiliyo)? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	8 Julayi 2019	• 17 Comments
Kukunzima ukucinga, kodwa ngaba uyazibuza ukuba ngaba abanye abantu abasondelene nawe banayo 'umphefumlo'? Kuphela kufuneka ukhangele ebomini bakho bemihla ngemihla kwaye ngamanye amaxesha ufumana abantu abanokukwazi ukwenza ngokuvelwano, kodwa ngubani na onokuhamba ngokunyanisekileyo ngaphezu kwabanye okanye enze ishishini ngokumomotheka ebusweni babo bonke ukuphazamisa 'ubuntu'.
UGeorge Ivanovich uGurdjieff wayeyingcali yefilosofi yase-Greek-Armenian, umlobi, umbhali, umqambi, umculi-mculo kunye nomthengisi. Ukuba ngokukhawuleza unokuchasene nale nto ngenxa yokuba unokuba unxamnye neGrike okanye ulwa-Armenian, yenza loo nto yenkxaso yenkcubeko yangaphambili kwaye uyifunde. le nkcazo kumntu:Ipesenti ebalulekileyo yabantu esidibana nabo kwisitalato ngabantu abangenanto ngaphakathi, oko kukuthi, sele befile. Sinenhlanhla kuthi thina asiyikubona kwaye ayiyazi. Ukuba sisazi ukuba bangaphi abantu abafayo ngokwenene kwaye bangaphi abafileyo abalawula ubomi bethu, simele sihluthe."
Ingaba ngaba kukuba kufuneka sithathe oku ngakumbi ngokwempawu kunokuba sicinga? Sisenokuba sazi iifilimu kunye noluhlu apho sibona iirobhothi ezibonakala zifana nobomi kwikamva elikufutshane ukuba awukwazi ukubona umahluko. IiRobhothi ezikwazi ukuqonda nokuphendula kwimvakalelo yabantu. Uchungechunge lwe-Netflix 'Abantu boMntu' ngumzekelo omhle wale nto. Ngomfanekiso, jonga ividiyo ye-YouTube ngezansi (kwaye ufunde ngezantsi).
Ngoku olu luhlu lulona luhlobo lombhobho onokulindela kuluntu ngexesha elifutshane. Ekuhambeni kwexesha, sifanele sicinge ngento yefilimu Transcendence ibonise ukuba yonke i-biology ingaphendulwa nge-nanotechnology. Oososayensi base-Israel sele beyakhele iphrinta yomzimba kulo nyaka onokuyinyathelisa iiseli zomzimba ezithile ngokusekelwe kwiinkcukacha zeselu ze-stem, umzekelo, intliziyo (jonga ividiyo engezansi). Nangona kunjalo, inzululwazi kulindeleke ukuba ifikelele kumzuzu xa i-biocells emzimbeni inokuthi ithathelwe indawo yiiyo-tech eyenzelwe iiseli ezingalungisa nayiphina impazamo. Ngaba ufumanisa ukuba ingcamango engenakwenzeka? Emva koko cinga malunga nento eyenzekayo xa unesilonda kunye nendlela umzimba womntu sele useneli propati yokuphilisa. (Funda ngakumbi phantsi kwevidiyo)
Umthetho wenkxaso yomzimba eNetherlands uye waqinisekisa ukuba izitho zenziwe ngokwenene (ngokusemthethweni) zibe yipropati yomhlaba. Iteknoloji yeprinta ye-Israel ibonisa ukuba lo mthetho wawungenangqiqo; kuba kwilizwe elifana neNetherlands kunye nebhunga elicebisi elibizwa ngokuthi 'ibhunga lezempilo' unokucinga ukuba abantu bayazi ngokwenene ukuba le teknoloji yayiza kwaye kuya kuba lukhuselekileyo kumanyathelo okuprinta kusasa. Ezi ziko eziprintiweyo aziyi kunqandwa ngumzimba, ngoko akukho mayeza kufuneka agonywe ukukhusela ukuphendula komzimba. Emva koko, ziprintwe izitho ezisekelwe kwi-DNA yazo.
Kwimeko nayiphi na into, kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba umzimba uya kuhlaziya iqela elingaphandle. Kwakhona kunomdla ukubona indlela abantu abafumana ngayo intliziyo ezinikeleyo, ngamanye amaxesha bathabatha iimpawu zomniki-mpahla, kodwa ngaphandle.
Umthetho wenkxaso yomzimba uqinisekisile ukuba urhulumente unamalungu akho kunye nokuba yonke into eyimpahla yombuso, urhulumente anga (ngokusemthethweni) enze isondlo esingacelanga. Uyakwenza oko ngezakhiwo zakhe, kunye nezibonelelo zakhe kunye nakwixesha elizayo mhlawumbi kunye nezo zinto ezintsha: izitho zakho. Oku kunokwenziwa kwi-intanethi nge-network ye-5G kunye nendlela yokuhlela ifu ebizwa ngokuba yi-CRISPR-CAS12 (jonga intshumayelo ye-TED engezantsi uze ufunde ngezantsi).
Ukuba ufumene ngokufutshane le ingentla, unokufumanisa ukuba umzimba womntu (kunye nayo yonke i-biology) sele yinto yokuhlaziywa kwakhona kwixesha elizayo, inxalenye nganye iya kuthi ibe yinto engaguquguqukayo.
Oku kungeniswa kuyakukunika ukuqonda okungcono indlela abaphathi beenkampani ezinkulu zobuchwepheshe bacinga ngayo noko bakwenzayo. Ngokomzekelo, umphathi wezobugcisa weGoogle, umqambi kunye nomfilosofi uRay Kurzweil uthi ku-2045 asiyi kufa kwaye sikwazi ukuhlala kwihlabathi elifanisayo elinjengobomi kangangokuthi asiyikuqonda ukuba yinto efanayo. Kwakhona uthi sinokufumana ii-avatars ze-nano-tech kunye ne-avatars zedijithali kwaye sizilayishe thina kulabo bavakalisi.
Yintoni "ukuqonda" okanye "umphefumlo"?
Umbuzo omkhulu ngulo: Ngubani na okanye yiyiphi into eyayilayishayo kulabo bavakalisi? Ngokwezithuthi zabantu ezifana noRay Kurzweil, ukuqonda yintoni iifom ngenxa yesibalo se-neurons engqondweni. Ukuba unokwakha i-robot ene-nano-tech receptors (i-neurons) eninzi kwinani njengaleyo yengqondo yomntu, i-consciousness ifom. Ngenxa yokuba iteknoloji ayilungele ukuphindaphinda ubuchopho bomntu, iinkampani ezifana neGoogle sele zisasebenza kwisisombululo sefu. Ungathi i-intanethi isisityebi esikhulu sokudibanisa iikhomputer ezininzi komnye nomnye ngendlela enokuyenza ngayo ingqondo. Itheknoloji yeBlockchain inokuba luncedo kwisixhobo. Ukongeza, ukuba unakho iikhomputha ze-quantum kwinethiwekhi, iya kuhamba kakuhle. Iinkampani ezinkulu zezobugcisa zixakeke ukuseka amanethiwekhi kunye negama ngokwayo bubungqina bokuba yintoni injongo yokuphela.
Nangona kunjalo ndifuna ukuthatha inyathelo emva kwaye ndihlale naloo mbandela 'yokwazisa'. Ingaba ingcamango yokuba abantu bayazi ngenxa yokuba bane-neo-cortex (kwaye ngoko i-neurons eninzi, njengoko uRay Kurzweil ephikisa) ngokungafani nezinye izilwanyana ezininzi? Okanye ingaba kukho into enomxholo ohluke ngokupheleleyo?
Ngenxa yokuqiqa, makhe sicinge ukuba unako ukulayisha "ukuqaphela" kwakho nge-2045 kwihlabathi ledijithali; ukufanisa okusebenza kwiqonga lefu leGoogle lokwenyani, umzekelo. Kwaye cinga nje ukuba kulula ukuba inkampani kaElon Musk i-Neuralink iyakwazi ukuxhoma ingqondo yethu kwi-intanethi. Emva koko unako ukuvuselela zonke iintlobo zezinto kwiingqondo 'zethu zangoku zomzimba zangaphambili' ezifana nokuthintela, ukuvumba, ukuva, ukubona kunye nokuziva (ukuthintela, ukuvutha komzimba, njl.). Ukuba i-Google yakha ukwakha umhlaba omtsha, sinokuhamba ngeenxa zonke kuloo mhlaba njengoJake Sully wenza kwihlabathi le-Avatar ye-Avatar ye-movie ye-2009.
I-trailer ye-movie i-Surrogates engezansi mhlawumbi umzekelo onzima ukuchaza apho ndifuna ukuya khona nokucinga kwam. Jonga ujonge ukuba kusekho umda phakathi komntu 'wokuqala' kunye 'nesimo sengqondo'. Nangona kunjalo, loo mifanekiso yefilimu isekelwe 'kwiirobhothi ezinjengobomi' okanye 'ii-avatars' njengoko sibona nakwiinkalo ezinjenge-'Abantu Bemi 'kwiNetflix. Nangona kunjalo, ukuba sithatha isilwanyana esifana nesimo sefu, apho idijithali yinto yedijithali, ngoko i-simulation 'ngaphandle kwehlabathi elibonakalayo'. Unokuthi, umzekelo, ulala embhedeni wakho kunye ne-brain-cloud interface kunye neqabane lakho elilele embhedeni elisecaleni lakho akunakucingisisa nantoni na into ebonakalayo ekulinganisweni. Mhlawumbi umzimba wakho uyamangalisa ngenxa yokuba ubuchopho bakho bububambano obunzima kunye namadoda aluhlaza okwesibonakaliso. (Funda ngaphezulu kwevidiyo).
Ukuba, ngokweengcali zenzululwazi ezifana ne-Google uRay Kurzweil kunye nabanye abantu abaninzi, kuba lula ukuba baphile kwizinto ezinjalo zokuphila kwangomso kwixesha elizayo, asinakuzibuza ukuba asikho ebudeni obufanayo? Akunabo bonke abo bahlobo lwekhabhinethi kwaye badlala kwi-avatar yehlabathi? Ukuba sibambelele kuloo mbono ngomzuzwana, ngoko sibuyela kwingcamango "yokuqonda." Khawucinge nge-future Neuralink uxhumano lobuchopho oluvela ku-Elon Musk aluxhasi kwaye luhamba nge-5G inethiwekhi. Emva koko unxibelelwano olungenawucingo ngqondweni wakho kunye nesimo sakho somfanekiso kwi-simulation kwi-platform yefu yeGoogle. Ngoko umntu olawula idijimenti kweso siboniso ngumbono wakho wokuqala osemzimbeni wakho obonakalayo kweli hlabathi langoku; lowo ubona xa ukhangela kwisibuko. I-avatar ekulinganisweni ilawulwa ngqondweni wakho wokuqala. Idijithali 'iphefumulelwe' kwaye inokuqwalaselwa kuloo mzekeliso njengomntu ophefumlelweyo 'onokuqonda'. Ukuphefumlelwa ngumgca ongenawucingo kunye nengqondo yakho yokuqala.
Ukuba uye wakwazi ukulandela oku ngasentla, ngoko ndikucela ukuba uhlawule ngokuthe ngqalelo kulo mvo-mvo olandelayo. Ngoku unokucinga ukuba kunjani ukuhlala ngendlela yokufanisa kunye nendlela idijimenti ekulo mfanekiso ilawulwa nguwe kwaye sinokubheka ukuxhumeka kwengqondo engenazintambo kwi-5G inethiwekhi kunye nokufaniswa ukuphefumlelwa kwe-avatar kweso simpawu.
Emva koko siza kumbuzo ukuba unokucinga ukuba umzimba wakho wangoku ngengqondo usenokuba yi-avatar ngokulinganisa. Ukuba sijonge i-slits ephindwe kabili ngecenicistist Niels Bohr, ibonisa ukuba umcimbi ukhona kuphela xa kukho umbonisi. Ngamanani amanqaku ndiye ndachaza ukuba sele 'siphila ngokufanisa'. Uqala ukuqala kakuhle ukuba wena eli nqaku funda ngokugqibeleleyo, jonga phantsi kwezinto zokumemeza kwimenyu okanye faka igama elithi 'ukulinganisa' kwisebe lokukhangela. Ndiyishiya lesingeniso emva apha kwaye sinciphise ukuqiqa kwindlela yokucinga ukuba sele 'siphila ngokumlinganisa'. Ndakubeka ngamabomu ngamanqaku angcaphuno, kuba awukwazi ukuhlala ngokumlinganisa, kodwa unokufumana isigwebo esipheleleyo sokuba uhlala kuyo, kodwa ngokwenene uyabona kwaye adlale kunye (ngaphandle.).
Ukuba sidlala ukulinganisa, kufuneka kubekho 'uxhumano lomphefumlo' kunye nomntu wangaphambili kwindawo ethile, njengokuba kufuneka kubekho uxhumano lwe-5G olungenazintambo lwe-Neuralink kunye nesimo semifanekiso yesigxina seGoogle ukuba uya kuthatha inxaxheba kwimimiselo ebonakala ngathi i-2045 . Ukuba 'uxhumano lomphefumlo' ngoko uxhumano lwenethiwekhi kunye 'nomntu wokuqala' umntu ohleli esihlalweni. Oko akufuneki kube yiplagi engqondweni, njengokwimifanekiso ye-movie ethi 'The Matrix', kodwa ingaba unxibelelwano olungenantambo. I-avatar ekumangalisweni ke 'ipapashwe' kwaye ilawulwa ngaphandle. Idijithali kule mzekeliso nayo ilawulwa ngaphandle. Mhlawumbi ngoku unengcamango engcono yombongo 'umphefumlo' okanye 'ukuqonda'.
In eli nqaku Ndacacisa ukuba mhlawumbi sishumayela isimiso se-virus. Ngaloo nto ndichaza ukuba lo mlinganiso uthetha ukuvavanya yethu yangaphambili ('ifomu lethu lokuqala'). Umakhi wesimangalo samanje ubonakala ngathi uyabonakala njengoLucifer. Oku kungabonwa ngokusekelwe kulolu "hlabathi likaSim", kodwa yonke into ibonisa ukuba ukufaniswa kufuneka kulandiswe ngendlela ethile. Ukuba njengomakhi wesimangeliso kufuneka uhloniphe 'umthetho wenkululeko yokuzikhethela', kukho indlela kuphela ye-1 yokuqinisekisa isiphumo somdlalo.
Umthetho wenkululeko yokuzikhethela
Ngaphandle kwentando yokuzikhethela, inkqubo ayiyiyo impawu, kodwa ngokwenene ihlobo lwefilimu, isiphumo esivele siqinisekile. Ingundoqo yesimangalo, nangona kunjalo kukuba unika abadlali umngeni kwaye ufuna ukuvavanya indlela abadlala ngayo umdlalo. Umzekelo, awuyikwakha isimulator yendiza ukwenzela ukuba inqwelo yendiza ibhabhise kunye nomhlaba kwi-autopilot, uyakha ukuba uvavanye umqhubi. Kwi-simulation-player simulation ufuna ukufunda indlela abadlali abaziphatha ngayo ngabanye kunye kunye kwaye babone ukuba yiyiphi ikhetho abaya kuyenza ngokwabo kunye kunye.
Indlela yodwa yokuqinisekisa isiphumo sesimangalo, ngaphandle kokuphazamisa umthetho wenkululeko yokuzikhethela, kukubeka i-NPC ezininzi (ezingabonakali ngabalinganiswa) ngokusemandleni kumdlalo olawulwa ngumakhi womdlalo. Unako, umzekelo, ukubeka ezi NPCs kwizikhundla ezibalaseleyo kwiimpawu kwaye ulandele iskripthi; iskripthi esenza ukuba akunakwenzeka ukuba abanye abadlali bathathe isalathiso esahlukileyo. Okunye malunga neskripthi esinokuyiqonda kulo mze keliso sinokufumaneka eli nqaku.
Masithi kukho umakhi we-1 we-simulation yethu yangoku okanye ngenxa yokulungelelanisa ukuba kukho iqela labakhi "kwinqanaba langaphambili", ngoko unokulawula kuphela inani elinqinqiweyo le-NPC ngaphakathi kokufaniswa; I-NPC ezilandela iskripthi ekumangalisweni kwaye uzama ukulungelelanisa abanye abadlali kwicandelo elithile (eliqhutywa liqela labakhi). Nangona kunjalo, kukho enye indlela yokuchaphazela iskripthi kunye nesiphumo, kodwa ke ngokokuqala sifanele sijonge ukuba ngubani na abadlali kwaye ngoko babuza apho yonke loo 'ntambo yomnxeba engenaxhala kunye nabadlali bokuqala' ivela khona; ngamanye amagama: bangaphi abadlali abadlala le ngqangi?
Yonke imiphefumlo evelaphi?
Inani labantu kulo mhlaba liza ku-8 billion. Ukuba siqala kwimodeli yokulinganisa, abadlali be-8 bhiliyoni 'kwinqanaba lokuqala' nabo badinga ukudlala lo mdlalo. Enyanisweni, umfundi obalaseleyo ngokwenene wayenokundibuza lo mbuzo: Zaziphi zonke ezo moya? Ngoku siyazi ukuba umxholo othi "umphefumlo" okanye "ukuqonda" ngokuqinisekileyo umele ukuxhamla kwisiseko sokuqala; ifomu yethu yasekuqaleni ngaphandle kwesi simiso. Yimi, njengokuba kunjalo, ukuxhamla inxibelelwano olungenantambo kunye neyokuqala (njengoko kuchaziwe ngasentla). Ngoko kufuneka kubekho abadlali ababalelwa ku-8 bhiliyoni kwinqanaba lokuqala.
Ndikrokrela ukuba akukho mimoya eyi-8 yemiphefumlo kunye nokuba akukho moya ohlula isixhobo, njengabantu abanjengo-Wes Penre bathi (bona apha). Ngokombono wam, loo nto yimbali engabonakaliyo. Kubaluleke kakhulu ukujonga imeko ekhoyo yangoku kwikhompyutha. Kuyo sibona ukuba iirobhothi ziya kuba zizimela ngokuzimeleyo kwaye ukuba injongo kukuba ingqiqo yolwazi ingaxelisa ulwaphulo lwabantu kunye nemvakalelo. Ngoko ukuba umakhi (okanye iqela labakhi) lalo mzekeliso uye wakwazi ukwakha ama-avatars okuziphendulela (umzimba wethu womntu), ngoko ke kunokwenzeka ukuba kucinge ukuba ezininzi izidumbu / ii-avatars esizijonga kuzo ziziphendulela, kodwa akukho lawulo lwangaphandle olwenzekayo. Zizo, njengokuba kunjalo, iinguqu zengqondo zentliziyo ezingenanto yangaphandle 'iJake Sully' kwaye ke aziphilwanga. Ngenxa yokulungelelanisa, makhe sibize le NPC ephazamisayo. I-NPC e-Soulless ayifuni kwaye ingaba nomdla kwaye inomdla. Kungenxa yokuba sijongene ne-AI ephakamileyo (kwi-bio-brain). Abakhi belo mzobo baye basebenzisa "ngokufanelekileyo" i-bots ephambili.
Emva koko unayo i-NPC elawulwa liqela labakhi balo mze keliso kunye neNPC ezibuhlungu ezineengqondo 'eziyingqiqo' kwaye zilungiswe kuqala ukulandela iskripthi. Iqela lokuqala lama-NPC lilawulwa "uxhumano lwe-wireless archontic" kunye nomakhi (/ iqela labakhi) kunye nokulawula iskripthi. Iqela lesibini lilandela iskripthi ngaphandle kweengxaki.
Nguwuphi umsebenzi weNPCs (zombie) owonayo (zombie)?
Okokuqala sijonge umphumo. Ukuba udlala umdlalo kwaye ujikelezwe ngama-NPC ahlambulukileyo alandela iskripthi, ngoko uya kufuneka ujongane nomxholo wokuxinzelelwa koontanga. Lo mze keliso lufana nokuphila ngendlela oye waqala ukuyiqonda ngayo.
Ngokuqinisekileyo, ingqiqo 'yokumangalisa' kulo mxholo ayikho into ngaphandle kokuba akukho ngaphandle 'Jake Sully' kumaqhosha aloo mntu.
Ngaba unakho ukuthetha nabantu abangenayo ingcamango yokuba igama elithi "umphefumlo" okanye "ingqondo", ngaphandle kokuba baye bathabatha ixesha elivela kwinkolo okanye kwindlela yokomoya? Ukususela kumzuzu wokuzalwa kwam ndiyazi kakuhle "umgca ngaphandle". Andiziboni mntu ndiyambona xa ndijonga kwisibuko. Ngoko ke ndiyazi 'iJake Sully' eqhuba idijithali yami kulo mzekeliso. Kuye kube njalo. Abantu abanama-NPC ahlambulukileyo (kodwa ngubani onokukhalipha kunye novelwano) abaphilwanga (abanalo Jake Sully kwinqanaba lokuqala ngaphandle kwalolu hlobo) kwaye ngoko abanakukucinga oku. Ukuthetha 'ngomphefumlo' okanye 'intliziyo' kuya kuba yinto enomdla 'wokuthatha inxaxheba kwindlela' okanye intetho yeRobot Sophia; ngokusekelwe 'ekukhetheni amagama'.
Umsebenzi we-NPC ophazamisayo ngoko ke ukukhohlisa ii-avatars eziphilileyo (okanye kunoko: abadlali bokuqala abathatha inxaxheba kulo mboniso-mdlali-mdlalo ngokusebenzisa avatar yabo) ukulandela iskripthi. Bamele banike ii-avatars eziphefumlelweyo ukuba banomncinci kwaye ukuchasana akusebenzi. Bamele babonise indlela emnandi ngayo xa uthatha inxaxheba okanye indlela ephosakeleyo ngayo xa uhlaselwa. Yingakho siye sabona abantu behlabathi bekhula ngokukhawuleza kwiminyaka emva nje. Yona iqhinga lokugqibela lomakhi walo mzekeliso.
Iphoyinti lokubambisa lifikile kwindawo ethile apho inani le-NPC likhulile kakhulu, kunika abadlali abaphefumlelweyo ngokuvakalelwa kukuba basesikhatshane. Sithandekile ukulibala ukuba ngumdlalo nje; ukuba sibona ukulinganisa.
Ngoko ke kubalulekile ukuphinda sibone ukuba ngubani kwaye sizithembele ngaphandle kolawulo. Zonke ezo zi-NPC kulo mzekeliso zisenza sikholwe ukuba silahlekelwa kwaye sinabantu abancinci. Oko kukukholelwa kokufaniswa. Kubonakala kubakho iibhiliyoni ekulinganisweni; ngaphaya kwelokuba mhlawumbi unesandla esilungela ukulinganisa. Ubunzima bethu bomzimba bubuchule bunzima kakhulu kulo mzekeliso. Leyo nje ingqondo yethu yobuchopho kunye nemvakalelo yayo. Sixhatshazwa yiBhabhiloni yokuphazamiseka kwentetho ngaphakathi kwesi simelo kwaye kufuneka sithule kwakhona kwaye siphulaphule ukuba ngubani. Khumbula uYake Sully.
Uludwe lwekhonkco lovimba: patreon.com
Akunjalo, asihlali kwindawo yokubumbana kwekhompyutheni yendawo yekhompyutheni: ukulahla loo nto
tags: avatar, ukuqonda, Abalinganiswa, eziziimbalasane, umdlalo, abantu, jake, multi, hayi, NPC, umdlali, ukudlala, yenene, ukulinganisa, Sully, mphefumlo
8 Julayi 2019 kwi-14: 56
Ukuba ngoku ucinga ukuba "Hayi mhlawumbi ndiyi-NPC!"
Okokuqala, mhlawumbi bekungekho kule website, kodwa kunokwenzeka ukuba iminyaka yokuhlela i-avatar yakho ingqondo ibangele ukhohlwe ukuba ungubani.
unqanda i-coudyser wabhala wathi:
8 Julayi 2019 kwi-18: 31
Sisalumkisa ngenyameko ukuba mhlawumbi abakhi abakhi beli faniso babandakanya ... Kwaye kutheni bekwenza?
8 Julayi 2019 kwi-18: 53
Andiyi kunika ingxelo ngoHans.
Ndithetha kuphela amathuba kwaye ndibize iqela lomakhi; njengoRay Kurzweil onokuba ngumakhi wesimo sokulandelelana kunye nokuhambisa iqela labaprogram ukuba baqalise phambili inkqubo yekhowudi yokufanisa.
Ukufundwa ngokukodwa ngamanqaku phantsi koqhagamshelwano.
Yuri Goosen wabhala wathi:
8 Julayi 2019 kwi-19: 08
Ndandiqonda kakade ukulinganisa njengomntwana omncinci, kodwa inkqubo yokuphindaphinda nokuphindaphinda kwezinto zitheleleka ngentsholongwane yokuthobela!
Njengomntwana ndaziva ukuba ndimele ndiphume apha ndazibuza ukuba bekuya kufani ukufa ukuba uzive oko. Andizange ndifune ukufa ngenxa yokungafuni ukuphila kodwa ngenxa yelukuluko!
Kamva ebomini abazali bakho babuza! "Yintoni ofuna ukuba nayo ebomini bakho?" Ndathi, "andiyi kuba nayiphi na kwaye andiyi kufunda ngenxa yokuba ezo zinto azinandithandi," ndathi. Emva koko abazali bam bathi: kodwa kufuneka ube yinto engelona nto!
Ndathi ke mna ndifuna ukuba kwaye ndiza kuhamba.
Kwaye emva koko ndibe ndiphulaphule kakuhle iimvakalelo zam kuba ngoku ndibanjwe kwiwebhu ye-bullshit!
Ngoko siyabonga ngale nqaku! Ndiye ndava ukuxhamla kwakhona kunye nento yokwenene!
8 Julayi 2019 kwi-21: 22
Kwaye ucinga ntoni ngombono wokuthi unanimate unokuphefumlelwa ngabantu abaphefumlelweyo ngexesha lokuphila kwabo? Ngoko phefumlela.
8 Julayi 2019 kwi-22: 00
Emva koko awukuqondi. Funda kwakhona ngokugqibeleleyo.
Ngaba unokuthatha elinye i-avatar xa udlala umdlalo wokudlala?
9 Julayi 2019 kwi-18: 16
Hayi, musa ukuthatha.
Kodwa ukuba elinye idijithali linengqondo onokuyisebenzisa.
Okanye ngaba oko kwakungeke kwenzeke ngenxa yokuba wenza ngamabomu i-ajenda yomdlalo?
9 Julayi 2019 kwi-18: 55
Wonke ama-avatar anengqondo kwaye unokwenza okuninzi ngesizathu kodwa ungalokothi ubangele uxhumano lomphefumlo.
I-NPC kwindawo yomdlalo wePlaystation ayisayi kuphinda ithole umntu kwiiqhosha.
9 Julayi 2019 kwi-03: 07
Ngaba ucinga ukuba kunokwenzeka ukuba uthengise umphefumlo wakho kumaziko angenanto. Kuthetha ukuba uhlehlise kwishumi elinanye (i-frequency ephantsi kakhulu) kwaye ulahlekelwe uxhumano lomphefumlo wakho. Uthengisa umphefumlo wakho ukuba uziphakamise ngezinye izinto ngenxa yokuxhaphazwa, ukubulala nokusabalalisa amanga ukugcina amandla akho.
Ekubeni uvela ekhaya, kunzima ukubuyela.
Oku akuthethi ukuba mna ndingcwele, kodwa ukuba ndiyenaxanduva lwam izenzo. Andizibandakanyi namasiko enkolo aphilileyo. Ukuba uyayazi yakho yokuqala, ufuna ukugcina olu xhumo kwaye ungahlaziywa kwizinga eliphantsi. Ngenxa yokuba ngoku siyaqonda ukuba senze oko ngaphambili kwaye sivame ukuziva sikude nekhaya kule planethi.
Oko ubhala kule nqaku kukuthi kukuthini, kubone ukuba konke malunga nawe kunye nempendulo yethu kuyo.
9 Julayi 2019 kwi-12: 55
Inqaku elungileyo, umcimbi onzima. Mhlawumbi kungekhona kubemi abaqhelekileyo, i-software yabo ayilenzelwe oko.
Umbuzo uhleli malunga nokuba ngubani owenze le meya, ukukholelwa, kunye nantoni na ayifumana kuyo. Mhlawumbi umakhi omkhulu nguLucifer, 'umlethi wokukhanya', kunye nabasebenzi abafana abavela kwiskripthi abavuzwa nguye? ??
Uluphi uLusif Ngaba uyayithanda ngokwenene, iholo elikhulu? Ngaba uLusifa mhlawumbi unguThixo?
9 Julayi 2019 kwi-14: 55
Funda inqaku elidibeneyo malunga nesisele se-stem apha:
U-Lucifer ngumakhi wesifo segciwane (ukulinganisa) esiyidlalayo. Kulo nqaku ndichaza ukuba kubonakala ngathi injongo ukusulela insimu ye-quantum ("i-cell stem").
Yingakho unqulo lwawo wonke unqulo luyimfihlo noLucifer kwaye ngoku unqulwa ngokucacileyo (ukuba ucinga kwi-YouTube) yiCawa yamaKatolika:
9 Julayi 2019 kwi-15: 19
Ngethuba (amehlo ami) kwindlela yokuqhuba nokuvuna ((ukubuyisela kwakhona) amandla okugcina le matrix yolawulo. Bona imiyalelo eyahlukeneyo eBhayibhileni, ukwahlula umququ kunye nengqolowa neebhokhwe kunye neebhokhwe, njl.
Uhlwayayo oko uza kuvuna, impendulo yempendulo ye-quantum evela kwi-ether.
9 Julayi 2019 kwi-15: 25
Kufuneka kuqatshelwe ukuba inkolo kunye ne-dualsime (imfano / i-satan model kunye nazo zonke ezinye iintlobo zobuqhetseba, ezifana nobuKristu ngokumelene nobuSulumane, ezishiya ngokubhekiselele kunene, i-yang kunye ne-yang, njl.) Ziyinxalenye yeskripthi soLuciferi ukwenzela ukuvelisa ubukhulu obulawula i-DC umgomo wokuphela.
Injongo ephambili kukudlala imiphefumlo (ngoko ekugqibeleni uqobo lwenu - ifomu yobunikazi obuye bahluma iiselfayile zezakhiwo / iimpawu zokudala) ukulungiselela inkqubo ye-virus ukwenzela ukutshatyalaliswa nokuthatha isambulelo se-cell / quantum.
Yingakho kubalulekile ukukhanyela / ukugatya inkolo yonqulo kunye nomendo ongenawo umntu onobuninzi (into enye kunye nesithembiso 'sobomi obungunaphakade' kwiinkonzo) kunye nokukhumbuza ukuba idlala intsholongwane (intsholongwane).
9 Julayi 2019 kwi-15: 34
Umsebenzi onzima we-idd uyenziwa ngokukhiya emnyango wokubonisa.
9 Julayi 2019 kwi-17: 56
14 Julayi 2019 kwi-16: 41
Uhlalutyo olukhulu; bulela kakhulu. Ndingomnye umntu owaziyo kwimihla yokuba kunezidimbane ezininzi kwi "mdlalo". Iimbalwa ezingezizo 'zombikazi' zingigcinayo apha, mhlawumbi ukuba ndibuye ndibuye 'ndingayiqondi ngokupheleleyo into eyenzekayo. Unokuhlala unenkxalabo ngokungapheliyo nangona kutheni umntu, umzekelo, akaqapheli ukuba imimoya isetyenziswa kwaye unakho. Okanye, ukuba uthe wacinga ukuba uvumelene neklasi ngexesha lokuphuka ukuba utitshala kufuneka ahlangane nalo, iqela liphela liya kuphumelela xa uthatha loo nto njengeqhawe. Impendulo yintlandlolo ine-backup, isalathisi nento 'yokuqala', i-zombie ayifuni. Ingxelo yakhe yinto awayeyifunde, ithathwe, ithathwe, iyagwinya, nantoni na. Akakho. Njengomfundisi womculo, kunye ne-30 iminyaka yamava ekufundiseni, ndiyazi ukuba banamaxesha ambalwa abakwazi ukudibanisa nezandi ezicocekileyo, ze-harmonic. Uninzi alukwazi ukwenza oko; 'unokuxelisa' kuphela kwaye ayisebenze kakuhle ngokucula (ngaphandle kofezekiso lobugcisa njenge-PA kunye nemakrofoni). Iimvumi eziphezulu ze virtuoso ngokwabo ziba ngumatshini wokukopisha omangalisayo, ongenakukwazi ukufumana nokudala kweso sikhashana; kodwa kulungile ukuvelisa. Umgca ohlukileyo olwahlula, kodwa ngokucacileyo. Ukumelana nokuphanda kwimeko yakho yokwenene, yakho yokuqala isisigxina se-zombie state. Kwaye, endizange ndikwazi ukuguqula umculi kwi-zombie ukuya kwi-original. Akuzange nanini. Abaninzi babo bacinga ukuba kunam; kuba ndibhekisela kuphela ekubuyiselweni kwakhona kunye neprogram yokuqala yecala kunye nokuvisisana. Ngaphandle kwezifundo zam iqela lam; ehlala inomdla kumfundi. Unako ukuhlala utshwenyeka 'ekuphumleni'. Yenza ubunzima obukhulu ukuqonda ezi zihlalutyo ozichazayo apha, kwaye ke kutheni kubaluleke kakhulu ubunzima bayo kwigolide. Kodwa kwakhona kukukhuthaza ukuba uhlale njengento yokuqala malunga noxinzelelo kwaye ungabandakanyeki nayiphi na intsholongwane; kwaye, umzekelo, akakwazi ukugonywa. Ngomnyaka we-57 andikaze ndibandakanyeke kwaye ndingatsho ukuba ndandinakekelwa kakuhle kwi 'yasekuqaleni'. Injongo yam kuphela ngeli xesha, ngaphambi kokuba ndibaleke kwakhona, kwakufuneka ndiyiqonde yonke into kwaye nditsho ukuba ndibe nomdla kule mdlalo ngoxolo. Abantwana bam, nabo banalo hlobo olufanayo lwegazi njengoko ndenzayo, kwaye olo hlobo lwegazi luhlala luya kuvelisa 'iimvelaphi', ngoko ngumbuzo wam olandelayo, ndifunda ukudlala umdlalo kakuhle, ukuzonwabisa (njengomdaniso, umzekelo) kwaye bavalelwa yizo Zombiya ngeemvakalelo zabo kwaye bazama ukukunyanzela ityala. Isebenza kakuhle kakhulu. Nibingelela!
14 Julayi 2019 kwi-18: 25
Kwaye nje ngezifundo zakho zomculo, eli nqaku lifikela kuphela elingenasiphelo, kuba abanye kuba yindaba ebangel 'umdla ayithandi nto. Yingakho ufumana igolide.
Iimfundo zezobugcisa kunye nomculo wee-conservatories ziindawo ezintle zokuhambisa ii-photocopiers eziphezulu kwaye zifakela abantu abanomdla kakhulu kwi-photocopiers. Ndiyabonga ngokubelana ngamava akho asebenzayo kwintsimi yezifundo zokucula.
Zonke iimpendulo zivela kwingqamaniso yakho engenazintambo kunye neyokuqala. Yingakho kwingoma ethi 'iBabiloni yokudideka kwentetho' Ndiyathetha ukuba simele sithule size siphulaphule ukuba usiphi na.
« Ngaba u-Ursula von der Leyen (umongameli we-EU kamva) ngokwenene kwigazi elifanayo njengentsapho yasebukhosini yaseBritani?
I-Deutsche Bank i-mass-fired sign sign first? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 10.755.108
kc2211 op Siza kuzisa njani utshintsho olukhulu xa i-99% ingahlali?
Mindsupply op Siza kuzisa njani utshintsho olukhulu xa i-99% ingahlali?